Curiosities momba ny Pomeranian | Tontolo alika
Curiosities momba ny Pomeranian
Kely, falifaly ary mavitrika, ny pomeranian Izy io dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra eran'izao tontolo izao noho ny fisehoany tsara tarehy sy ny mampiavaka azy ary ny manafiny be dia be. Mifandraika amina tantaram-pianakaviana kilasy ambony, izy io dia manana ny lazany amin'ny ankapobeny amin'ny maha biby fiompy iraisan'ny olo-malaza azy. Amin'ity lahatsoratra ity dia mamintina ireo te hahafanta-javatra sasany manodidina ny fiainan'ity volom-borona kely ity isika.
1. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe Spitz dwarf alemana, manondro ny firenena niavianao.
2. Avy amin'ny alika sled Nordic any Islandy sy Lapland izy io, toa ny husky Siberia na ny malamute Alaskan. Zava-misy manaitra tokoa izy io, manoloana ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny habeny. Na izany aza, tsy maintsy jerena fa nilanja 12 kg ny Pomeranians tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Samy hafa ny karazany noho ny fidiran'ny mpiompy.
3. Momba ny ny hazakazaka Nordic kely indrindra, satria ny lanjany dia eo anelanelan'ny 1,5 sy 3,5 kg. Ny haavony dia manodidina ny 13 sy 18 cm amin'ny malazo.
4. Izany dia iray amin'ireo karazany ela velona indrindra, mametraka ny androm-piainany eo anelanelan'ny 15 sy 20 taona.
5. ny klioba voalohany natokana ho an'ny karazany dia nanomboka tamin'ny 1891, Any Angletera. Tao dia nalaza be izy io nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, nametraka ny tenany ho iray amin'ireo biby fiompy ankafizin'ny aristokrasia sy ny mpanjaka.
6. Ao amin'ny filaharan'ny fahaizan'ny canine notarihin'i Dr. Stanley Coren tamin'ny 1994, ny pomeranian laharana 23.
7. Antsoina hoe pomeranian noho ny faritra misy an'io anarana io ihany, eo anelanelan'ny Polonina sy Alemana, izay nandalovan'ity alika ity tany Eropa. Tany no nampiasana azy ireo ho alika mpiara-miasa sy mpiompy.
8. ny Mpanjakavavy Charlotte avy any Angletera Tena tia an'ireny biby ireny izy, nampiditra azy ireo tany amin'ny lapan'ny mpanjaka tamin'ny taona 1767. Hanohy ity fialamboly ity i Queen Victoria amin'ny alàlan'ny Pomeranian Marco, azony tany Florence. Teo anelanelan'ny roa dia nitombo be ny lazan'ny karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Curiosities momba ny Pomeranian
Fomba fanamainana ny volon'ny Golden Retrievers
Tahaka ny inona ny alika Bulldog?